Sacuudiga Oo Ka Mid Noqday Afarta Waddan Ee Haysta Tirada Ugu Badan Ee Gaadiidka Dagaalka Ee Gaashaaman - Waadinews | Somali News and Entertainments
Mareegta caalamiga ah ee “Globalfirepower” oo ku caanbaxday qiimaynta awoodaha milatari ee waddamada caalamka ayaa sheegtay in Sacuudigu uu ka mid yahay shanta waddan ee haysta tirada ugu badan ee gawaadhida gaashaaman ee milatarigu adeegsado. Gawaadhida dagaalka ee gaashaaman oo ka mid ah awoodaha ciidamada casriga ah ayaa waxaa loo adeegsadaa hawlo ay ka mid yihiin daadguraynta ciidamada, sahanka, iyo iska horimaadka sida tooska ah ciidamada u dhexmara.
Milatariga Ruushka ah oo ku qalabaysan tirada ugu badan ee gawaadhida dagaalka ee gaashaaman ayaa haysta tiro lagu qiyaasay 50 kun oo ah gawaadhida gaashaaman. Kaalinta labaadna waxaa ku jira Shiinaha isaga oo lagu qiyaasay gaadiidkiisa dagaalka ee gaashaaman in ka badan 40 kun oo gaadhi. Maraykanka oo haysta 39 kun ayaa ku jira kaalinta saddexaad, halka Sacuudiguna uu kaalinta afraad ku cidhiidhisaday gawaadhi gaashman oo lagu qiyaasay in ka badan 11 kun.
Ciidanka Ukraine oo Kaalinta shanaad ku jira ayaa waxa lagu qiyaasay gawaadhidiisa gaashaaman in ka badan 10 kun. Sacuudiga ayaa Bariga Dhexe ugu horreeya dhinaca gawaadhida gaashaamna isaga oo ka horreeya Turkiga oo haysta In ka badan 6500 kuna jira kaalinta toddobaad, iyo Israa’iil oo haysta In ka badan 9500 kuna jirta kaalinta tobnaad. Dawladda Imaaraatka Carabta oo haysta 5900 ayaa ku jirta kaalinta 12 aadd.
Masar oo ahaan jirtay quwad Carbeed ayaa soo gashay kaalinta 13aad waxayna haystaa ilaa 5700 halka ay Iiraan oo ah quwad ka jirta Bariga Dhexe ay ku jirto kaalinta 31aad, waxayn haystaa 2300 oo ka mid ah gaadiidka dagaalka ee gaashaaman.